Xeerarka Isbeddelka | Doodwadaag waa Danwadaag.
Isbeddeldoon, waa eray aad ugu faafay hadallada bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan, in kasta oo uu magacaan yahay mid aanu ku shaqaynaynay muddo 8 sano laga joogo, oo uu u yahay kooxdayada magaca lagu yaqaanno. Haddaba waxaan la kulmay muddadii aanu ku jirnay howshaan iyada ah caqabado iyo khibrado aad u tiro badan site cialis generique. Maqaalkan waxa uu si kooban u taabanayaa caqabadahaa iyo sidii looga tallaabi lahaa.
Ma jiro qof Soomaali ah oo ku qanacsan noloshiisa, maadaama aysan hagaagsanayn tii umadda ee guud, saameynteeda xunna ay tahay mid aan lag il duufi karin. Ilmo-adamnimo ahaan iyo diin ahaanba kama suuragalayso qofka in uu nolol uu ku qanacsanyahay helo kol haddii darisikii, qaraabadii iyo guud ahaan ba umaddiisii Soomaaliyeed ay dhibaataysan tahay. Sidaa darteed, waxaa marwalba kugu sii ballaaranaya dareenka baahida loo qabo isbeddel.
Qofka doonayo isebeddelka, waa in marka hore isaga isbeddelaa, si uu dadka u tusiyo doonistiisa, saameyna ugu yeesho qalbiyada dadka. Haddii aysan taa jirin, waxaa dhacaysa in qofka isbeddelka raadinayaa uu uga baahi badan yahay kan uu u raadinaa. Waxuuna qofka ku tilmaaman yahay tilmaamahii umadaha fashilmay uu quraanka ku sheegay, in ay iyagu wanaagga faraan balse ay hilmaamaan naftooda. Diinta Islaamka way ka digaytaa dhaqankaa, waxayna ugu yeeraysaa qofka Muslim ka ah inuu ka weynaado arrintaa.
Aqoon Dhab ah
Aqoonta waa furdaamiyaha caqabadaha dunida haddii ay noqon lahayd dad iyo duunyaba. Qofka isbeddelka doonayaa waa in uu aruursadaa aqoon ka kaalmaysa isaga in uu isbeddel xaqiijiyo, kadibna u horseedi karo dad kale. Aqoonta halkaan la doonayaa ayaa ah mid aadanaha iyo dunida la xiriirta. Sidoo kale, qofka waxaa laga doonayaa inuu akhriyo aqoon kala gaddisan si uu u yeesho garasho baaxad leh oo u suuragalisa furfuridda sirqaha nolosha ee murugsan.
Furfurnaashaha iyo daacadnimada waa dhaqan Isbeddel. Hubso inaad furfuran tahay, daacadna tahay, umadaha qamta ah waxay calaamad u tahay sida ay noloshooda mugdi ugu jirto. Sidaa darteed, furfurnaashiiyaha ayaaba kaligii ah hadaf lagu dadaalo. Waa nasiib darro dad aan wadaagi karin danahooda, isla markaana aan isu sheegi karin dhibka iyo dheefta. Cabsida, ayaa ah midda ka hor istaagta in qofka oo ku noolaado nolol furfuran oo xalaal ah. Wadaagga xaqiiqooyinka nololeed waxay nagu dhalin karaan fakir horumar leh.
2-Waydiin Ku Dhalin
Tallaabada ugu muhiimsan ee uu qofka u qaadayo isbeddelkiisa iyo kan dadka kaleba, waa waydiin dhalin joogta ah oo uu ku hayo nolosha. Haddii ay dhacdo inay wax meel kaaga bidhaamaan isla markaana dad kale aysan ku la wadaagin, isku day inaad dareen iyo iswaydiin qofka ugu sheegto. Waa mide, iswaydiinta, waxay qofka u horseedaysaa helista jawaabta ama inuu kaa soo raadiyo jawaabta aad u hayso iyo aragtidaada, waa ta xigtee, qofka kaama didayo umana qaadanayo inaad u awood sheeganayso oo aad leedahay aniga ayaa kaa aqoon badan, taa oo laga yaabo inay u keento cinaad iyo madax adayg uu kaa la hor-yimaado.
Haddii ay dhacdo inay dood aloosanto adiga dartaa ama arrin aad danaynayso, waxaa lagaa doonayaa inaadan fuulin doodda ee aad dhinac uga istaagto, inaadan isku lurin soo bandhigista caddaymahaaga oo dhan iyo inaad had iyo jeer hubsato dagganaashaha iyo edebta goobta inaysan hallaabin. Waxa aad ku dadaalaysaa waa inaad qofka ku baraarujiso dulduleellada dooddiisa, haddii ay adkaatana aad faraha kala baxdo, si aadan qofkaa u waayin, fursadda wada-hadalkiinnana uu sii jirto. Ogow, dunida laguma laabayo hal maalin.
Haddii aad qofka u caddeyso aragtiyadaada si daacadnimo ku dheehan tahay,waxaad tahay deeqsi loogu baahi badan yahay-maanta waxa loogu baahi-badan yahay-waa qof ku siiya waxa qalbigiisa ku jira, oo kuu wara wadnahiisa si aad uga adeegato. Qofka markaa loo waray, labo mid unbuu noqon, gun waran ka asla ama gob-kadib markii uu ka adeegto- inta kuu xarxardha halkiisa kuugu celiya.
“Ka falka guneed leh, haka quusan.. waxaa laga yaabaa inaad aragto maalmo kadib, isaga oo meel fagaaro ah ku doodaya dooddii uu darteed kugu dilayay”.
5-Sabarka & Joogtaynta
Suuratu-Alcasr, Ilaah waxa uu ku baraarujiyay Muslimiinta in ay isu dardaarmaan xaqa, waxa uu isla markiiba raaciyay, in ay isu dardaarmaan Sabarka. Imaamu-Shaafici, baa laga hayaa “Haddii Eebbe sw soo dajin lahaa Aaydaan kaliya, waxay nagu filnaan lahayd. Taa waxay muujinaysaa Sabarka muhiimada uu u leeyahay Isbeddelka. Waxaan u taagnahay Isbeddel, dadkana waan laaynayaa, waa Mooryaannimada dalka intii mudda ah ba ka hanaqaadday. Isbeddeldoon waa qof doonaya in uu bedbaado isla markaana badbaadiyo dadka, isagana u bareeray culayska arrintaa leedahay iyo Sabarka ay tabanayso.
Waxaan u arkaa qodobbada kore ay astaan u noqon karaan Isebeddeldoon dhab ah oo ka hir-gala carradeenna, Isbeddelkaa oo taabanaya dhamaan qaybaha kala duwan ee nolosha, dowladnimada, bulshada, dhaqaalaha, waxbarashada iyo fahanka diinta. Qofka aaminsan in waxwalba u saxan yahiin maanta ee Soomaaliga ah, waa qof Caga-gubyoonaya oo aan haddana isku dayayn sidii uu u badbaadi lahaa.
WQ Cabduraxiim Shaafici